နေ့တိုင်း တရားထိုင်သင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၁၀)ခု
ဗဟုသုတ | Posted By ဇာနည်ကျော်
[Unicode] တရားထိုင်ခြင်းဟာ စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကို ရရှိစေပြီး ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် ပိုပြီး နားလည်သဘောပေါက်လာစေတဲ့ အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်နည်းနည်းပဲ ဖြစ်စေ၊ များများဖြစ်စေ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း တရားထိုင်သင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၁၀)ခုကို...
အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ အိမ်တွင်း ပတ်ပတ်လည်အတွက် ဆားရဲ့အသုံးဝင်ပုံ...
ဗဟုသုတ | Posted By အေးမြတ်သူ
[Unicode] ကိုယ်မှာရှိတဲ့ တချို့ မီးဖိုချောင် ပစ္စည်းတွေက ဟင်းချက်ရာမှာပဲ အသုံးတည့်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့် အခြားသော နေရာတွေမှာလည်း တကယ်အသုံးဝင်တာကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ဆား များများစားတာကတော့ ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းပါဘူး ။ သို့သော်လည်း...
မေတ္တာဖြင့် ပေးကမ်းခြင်း (Gift)
ဗဟုသုတ | Posted By နှင်းအိခင်
[Unicode] အိမ်ခြံမြေ တိုက်တာ အဆောက်အဦစတဲ့ အခြေပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို မိဘဘိုးဘွားမှ သားသမီးမြေးမြစ်ကိုဖြစ်စေ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးမှ ၎င်း၏ ဆွေမျိုးတော်စပ်သူတစ်ဦးဦး သို့မဟုတ်တစ်ဦးထက်ပို၍ဖြစ်စေ ပေးကမ်းခြင်းမျိုးကိုသာ မေတ္တာဖြင့် ပေးကမ်းခြင်းလို့...
လန်းဆန်းစွာဖြင့် အိပ်ရာစောစောထနိုင်ရန် နည်းလမ်း (၆) သွယ်
ဗဟုသုတ | Posted By ရွှေစင်ဝင်း
[Unicode] အိပ်စက်ခြင်းအကြောင်း ဆွေးနွေးလိုက်တိုင်း တူညီကြတဲ့အမြင်တစ်ခုကတော့ တစ်ညကို ခြောက်နာရီကနေ ၈ နာရီအကြာ အိပ်စက်အနားယူသင့်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒါကတော့ ကာလရှည်ကြာရပ်တည်နေတဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး မကြာသေးမီက လေ့လာမှုတွေကတော့ ဒါဟာ တကယ်တော့...
ငှက်ပျောသီးကို အစာမရှိပဲမနက်စာအဖြစ် စားခြင်းမှရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်းများ
ဗဟုသုတ | Posted By စည်သူအောင်
[Unicode] ငှက်ပျောသီးမှာ အဟာရဓာတ်ပေါကြွယ်ဝလွန်းလို့ ခံတွင်းလည်းမြိန် ကျန်းလည်းမာစေဖို့ စားသုံးကြပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးမှာ နှလုံးကျန်းမာစေခြင်း၊ ပင်ပန်းနွယ်နယ်မှုကို သက်သာစေခြင်း၊ သွေးပေါင်ထိန်းပေးခြင်၊ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုကို သက်သာစေခြင်း၊...
[Unicode] မိဘများနှင့် ညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မများအကြားတွင် တခါတရံ မောင်နှစ်မများအနက် တစ်ဦးတည်းကိုသာ အမွေအားလုံးပေးအပ်လိုခြင်းများရှိတတ်ပါတယ်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်လိုသည့်အခါ တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းဖြစ်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ရန် နည်းလမ်း (၂)မျိုးရှိပါသည်။...
လမ်းဦးတိုက်မှာ နေသူတွေ ချမ်းသာကြပါစေ
[Unicode] တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ်ထံသို့ ကျွန်ုပ်၏ ကျောင်းနေဘက် ငယ်သူငယ်ချင်းတစ်ဦးဖြစ်သော ခင်မမကြီးဆိုသူ အပျိုကြီးတစ်ဦး ရောက်ရှိလာလေ၏။ ၎င်းသည် နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားဘက်၌ လုပ်ငန်းများထူထောင်ထား၏။ ကျွန်ုပ်သည် ၎င်းအား မနောမယ လက်ဖက်ရည်ဖြင့်...
အဲကွန်းဖွင့်ထားတဲ့အခန်းထဲ ခြင်ဆေးခွေထွန်းလို့ ရသလား?
[Unicode] ပိုပိုပြီးပူပြင်းလာတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာ လူအတော်များများဟာ အပူဒဏ်ကို တွန်းလှန်ဖို့အတွက် အဲကွန်းကို ဖွင့်ကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဘာပြောစရာရှိသလဲဆိုရင်တော့ အဲကွန်းဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာ ခြင်ဆေးခွေနဲ့...
နေအိမ်အနီး သစ်ပင်နိမိတ်များ နှင့် အိမ်သစ်တွင်ရေးရန် အက္ခရာများ
[Unicode] နေအိမ်အနီး သစ်ပင်နိမိတ်များ…. အိမ်အနောက်က သစ်ပင်ကြီးရှိသော် မယားသေမည်…။မင်းပူဇော်ခံရမည်…။ အရှေ့စူးစူးရှိသော် ကျော်စောမည်…။အရှေ့တောင်ရှိသော် ကျော်စောမည်..။ အရှေ့တောင်ရှိသော် ရောဂါရမည်…။တောင်က ရှိသော် လာဘ်ပေါမည်…။ အနောက်တောင်က...
မချက်မပြုတ်ခင်မှာ ကြက်ဥကို ဘာကြောင့် ရေမသန့်စင်သင့်လဲဆိုတာ
[Unicode] ဘယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုမဆို မချက်မပြုတ်ခင်မှာ ရေသန့်စင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာက ကျွန်မတို့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ စွဲမြဲပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်မတို့ဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွှတ်အောင် စားသောက်ရမှာဖြစ်တာကြောင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ သန့်စင်နေတာ ပိုကောင်းပါတယ်။...
Copyright © 2022 Royal Tun Thitsar Co., Ltd. - Royal Tun Thitsar Co., Ltd.